Dhul Gariir Xoogan Oo Ka Dhacay Jaziirad Lagu Muransanyahay Iyo Khasaaraha Ka Dhashay - Borama News Network %
Dhulgariir cabirkiisu lagu qiyaasay 7.8 Richter ayaa subaxnimadii saaka oo Arbaca ah ku dhuftay Jaziiradaha Kuril ee dalka Ruushka, sida laga soo xigtay Machadka qiimeeya Dhulgariirada iyo Sunaamida ee xaruntiisu tahay America.
Machadka ayaa sheegay in xudunta dhulgariirku ka dhacay ay tahay meel 59-km dhinaca badda kaga beegan Jaziirada Kurli, sidoo kalena qiyaastii 1400 km waqooyi-bari kaga beegan magaalada Sapporo ee dalka Japan.
Xarunta Digniinta sunamiga ee Mareykanka ayaa sheegtay in aan illaa waqtigaan la ogaan karin dhibaatada uu gasytstay balse wali ay ku hawlan tahay qiimeyn ay ku samaynayso xaqiiqada rasmiga ah ee ku saabsan haddii ay jiraan khasaare ka dhashay dhulgariirkaas.
Kuril waa afar jasiiradood oo ku yaalla inta u dhaxaysa Badda Okhotsk iyo Badweynta Baasifigga, afartaas jasiiradood waxaa ku muransan Dawladaha Ruushka iyo Japan.
Afarta jasiirad ee lagu muransanyahay waa Habomai, Shikotan, Iturovo, iyo Kunashiri, Dawladda Ruushku waxay ugu yeertaa Jaziiradahan Kuril, halka Tokyo ay ugu yeerto “dhulalka waqooyiga.”
Muranka ka taagan jasiiradahan ayaa ka hor istaagay Dawladaha Russia iyo Japan inay kala saxiixdaan heshiis nabadeed oo si rasmi ah usoo afjaraya colaadda u dhaxaysa labadaas dal oo soo taagnayd than iyo dagaalkii labaad ee adduunka, inkasta oo dib loo soo celiyay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeyey Tokyo iyo Moscow 1956.
Qarax Khasaare Dhimasho Iyo Dhaawac Oo Sobobay Oo Maanta Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Amnesty Oo Dowlada Somaliya Ku Eedaysay In Cubudhin Iyo Cagajuglayn Xoogan Ku Hayso Warbaahinta Madaxa Banaan
Bnnstaff Bnnstaff February 13, 2020 February 13, 2020
Waayaha Faneed Ee Fanaanada Caanka Ah Ee Khadiija Fooday
Mustafehaji January 3, 2020
Dr Maxamed Yusuf oo ku Nool China oo ka warbixiyey Coronavirus
Mustafehaji January 30, 2020
Dowlada Somaliya Oo Labo Maamul Goboleed Ku Wareejisay Qalab Lagaga Hortego Coronavirus